March 2014 - Page 3 of 96 - iftineducation.com
iftineducation.com – Raaxa sariireed degdegta oo socota waqti gaaban isla markaana dhamaata wax nah ah ay leedahay ma leh labada qof ee raaxadaas wada qaadanayana ma helayaan qanac dhamays tiran haddaba hadaad si fiican u akhrisid qodoban isla markaana aad si wanaagsan u fulisid waxaa hubaala ah in aad gaaraysid raaxo dhamaystiran isla markaana ay noloshiina ka lamaane ahaan ay wax…
iftineducation.com – Ceeb ma ah in hab waliba oo macaantaada ku heli karto gariirka galmada u sameeyso , hadaba galmada lagu sameeyo istaaga ayaa haween badan la dhareeraan oo wax ay helaan macaan kii ugu dambeeyay. Habkaanayaa ah in ninka uu istaago halka haweeneyda iyana ay gacameeda ku qabsaneyso qoorta ninka , waxa uu ninka sameeynayaa in uu kor qaado lamaantiisa…
iftineducation.com – Baarayaal ayaa shaaca ka qaaday in ragga Internet-ka Wi-fi-ga ah u isticmaala Laptop-yada ee saarta bowadada ee u dhaw xubinta taranka ninka in taas ay yareneyso oo ay hoos u dhigeyso qadarka shahwada ayna wax yeeleneyso xaniinta. Waxaa la tilmaamay in shucaaca Electromagnetic ee ka so baxaya aalada Wireless Communication-ka in ay wax weyn u dhimayaan shahwada ragga bowdada…
markey qofta kacsan tahay sidaanaa lagu gartaa ee marax yahow fahan.
iftineducation.com – Waxaa jira marxalado badan oo jir ahaaneed oo xiliga kacsiga waxaana la kala yiraahdaa kacsi, karkaar, biyo dhac iyo qaadiro. Marxalada 1: kacsi ama xiisayn Marka ay qofka dumarka ah kacsato, tiiftaafyada dhiiga ee xubnaheeda taranka waa ay jilcayaan waxaana siyaadaya dhiiga aadaya gidaarada geedka ama siilka taas oo keenaysa dheecaan yar oo ka gudba darbiga geedka waana sababta…
Sir waa tan sababta rag badan u jecel yihiin gabadha bikrada ah.
iftineducation.com – Waxaa la sheegay in dumarkaqaarka gadaal ubuuran ay leeyihiin dareeen aad u macaan xiliga galmada. hablaha leh “back” ama bowdyaha waaweyn hadana raaraca ayaa la sheegay inay ka kacsi badanyihiin kuwa dhuudhuuban. Raga Afrikaanka ah ayaa la xusay inay aad u jecelyihiin dumarka qaarka dambe u weyn. Raga u dhashay qaarada Afrika ayaa aad u jecel dumarka inta dambe…
Dareen La’aanta Ciyaarta Haweenka Oo Saameyn Ku Yeesha Xiriirkooda.
iftineducation.com – Dareenka galmada waxey ka dhigtaa haweenka kuwa la yaab leh,laakin marka aysan dareemeyn galmada waxey u horseedaa iney dhaawacdo kalsoonideeda iyo iney yeelato saameyn diidmo ah xiriirkeeda. In ka badan 70 percent haweenka waxey sheegeen in dareen la’aantooda galmada ay si xun u saameyn doonto xiriirkooda. Tani ma sameyneyso wax layaab leh marka aad qiimeyneyso in 30ka kale ee…
Daawo Video Ku Saabsan Dumarka Riyada Ku Biya Baxa adaa yaabi doonee
aadan21 / March 30, 2014
iftineducation.com – Ragga iyo dumarka ayaa labadooduba xiliyada qaar waxay ku riyoodaan riyo galmeed ah in ay galmo sameeynayaan labadooduna waa ay ku biya baxaan riyadaasi. Hadaba halkaan waxaan idin kugu haynaa muuqaal ku saabsan gabar ka hadlaysa riyo galmeedka iyo siyaabaha dumarku ugu biya baxaan. Riix Halkaan ka daawo muuqaalka:
DAAWO : Gabadh Soomaaliyeed Oo Malaayiin Somali iyo Muslimiin ah Kaga Cadhaysiisay Kadib Muuqaalkan waliba Meel shaaric ah (Ceeb badanaa)
iftineducation.com – Gabadhan Soomaaliyeed ayaa iyadoo dariiqa ku sugan waxa ay ku kacaysaa fal laga wada naxay kaas oo kaga cadhaysiiyey Malaayiin Soomali iyo Muslimiin ah kadib markii lasoo geliyey Barta Internetka Muuqaalkan Qaabka daran ee waxashnimada ah iyadoona muuqaalkani uu yahay mid aad looga naxo marka loo fiiriyo dhaqanxumada ay gabadhan Soomaaliyeed ku kacayso. HALKAN RIIX SI AAD U ARAGTO…
U Gaar Ah Dumarka: Ragga oo meeshaan hadaa ka martid aad sixraneyso xiliga galmada
iftineducation.com – Marka laga hadlayo qaabka Dareenka Ragga waa ku kala duwanyihiin, Balse waxaa jira meelo dhowr ah oo inta badan Ragga ay isaga mid yihiin. Hadaba si ay uga faa’iideystaan Gabdhaha Webka iftineducation.com wuxuu idiin bidhaaminayaa meelaha inta badan ay isaga mid yihiin. 1:- Dhagaha :- Dhagaha oo Carabka aad ku salaaxdo marka ay socoto Ciyaarta Sariirta wexey ka qeyb qaadataa…
DAAWO : Gabadh Soomaaliyeed Oo Qurbojoog ah Oo Filmkii Ugu Anshax-xumada Badnaa Masraxa Soo saartay (Ceeb ),,
iftineducation.com – Waa Muuqaal Anshax-xumo oo Kale oo ay ku Kacday Gabadh Soomaaliyeed oo soo saartay Muuqaal aaddan Malaysan Karin kaas oo ah mid dhaqanxumadii u darnayd ah. Muuqaalkan ayaana waxa uu saamayn ku yeeshay umada kadib markii ay dad badan oo Soomaaliyeed aad uga xanaqeen. HALKAN RIIX SI AAD U DAAWATO WAXAY SAMAYNAYSO